Isithiyelo sika Satana - Cloud Library
Ekhaya - Iincwadi - Isithiyelo sika Satana
Isithiyelo sika Satana
Isibonisa enye yemikhala yokhohliso likaSatana azisebenzisa ekukhupheni amakholwa kwi ntando kaThixo-ukukhubeka. Abantu abaninzi ababanjwe yimikhala kasatana abayiboni lonto.
Ungakhohliswa! uKristu wathi, “Azinakuba zingezi izikhubekiso” (Luka 17:1). Awukwazi ukukhetha ukuba uzakukhubekaokanye soze, kodwa uyakwazi ukukhetha ba uphendula njani. Ukuba ijongana nokukhubeka kakuhle, uzakubanamandla kunokuba ubekrakra. Impendulo elingileyo yodwa ezakwenza ubenolwalamano olungaphazamiswayo noThixo.
Ngalomyalezo, uJohn Bevere uzakuxhobisa ukuba uhlale kwi ntando kaThixo ukhululeke kwintsolo nokungathembi. Ungaqwesha ingqondo yokubali xhoba uphila ngaphandle komthwalo wezamandundu nodandatheko. Xa ufumana inqanaba elikhulu lokuthobela uThixo, ubomi bakho buzaku phuphuma ngokuxolela, noxolelwaniso, novuyo- eli soloko likhula.
Khuphela (~4.32 MB)